Empresas brasileiras, maka ihu ọma!
Empresas brasileiras, maka ihu ọma! 2 afọ 5 ọnwa gara aga #921
Eu gostaria muito de ter um pacote de aeronaves da TAM (LATAM) para FsxỌ ga-enyere gị aka ịnwe ike na ngwongwo ngwugwu 777-200ER, eu gostaria muito de ter uma textura da TAM para esta aeronave (B777-200ER). Ndị tozuru ogo dos addons aqui ão incríveis, continuem trazendo isso para nós! Obrigado.
Enwekwara m ngwugwu ụgbọ elu sitere na TAM (LATAM) ruo Fsx, otu n'ime ngwugwu kachasị mma dị na Ultimate Pack 777-200ER, Achọrọ m ederede TAM maka ụgbọ elu a (B777-200ER). Ogo nke add-ons ebe a bu ihe itunanya, na-ewetara ya anyi! Daalụ.
Ndị na-esonụ ọrụ (s) kwuru Ekele dịrị Gị: rikoooo
Empresas brasileiras, maka ihu ọma! 2 afọ 5 ọnwa gara aga #922
Nke mbu, anabatanụ m na Rikoooo. Ọ dị mma ịnụ na ụgbọ elu ahụ masịrị gị. O di nwute, anyi adighi eme ha add-ons. Nke pụtara na anyị enweghị ike ịgbakwunye ma ọ bụ ịgbanwe ihe na ha. Ọ bụrụ na enwere ụfọdụ njehie, anyị nwere ike idozi ya, mana nke ahụ bụ ya.
Nke abụọ ... Aghaghị m ịdọ gị aka ná ntị, nke a bụ Mpaghara Bekee, yabụ na ị gaghị etinye akwụkwọ n'asụsụ ndị ọzọ.
Ọzọkwa, nabata ma nwee ezigbo oge ebe a.
Oge ike page: 0.173 sekọnd